Weerarkii Villa Somalia: Shacabka waa Marqaati in Amaanka uu gacanta ka baxay | Home Somali Arguments
← MY LIFE IN MOGADISHU: THE VIEW FROM INSIDE THE VILLA SOMALIA – BY JUSTIN MAROZZI
Muxuu soo kordhin karaa Isbedalka lagu sameeyey Madaxda Amniga ee Dowlada?(Warbixin Xasaasi ah) →
Weerarkii Villa Somalia: Shacabka waa Marqaati in Amaanka uu gacanta ka baxay
Wednesday 9 July 2014 – Fiidnimadii Xalay (Tallaadadii), xilli Shacabka Muqdisho ay u fadhiyeen Afurka ayaa Qarax weyne oo la soctay Rasaas xoogan laga maqlay Gudaha & Banaanka Dhismaha Madaxtooyadda Soomaaliya, Villa Somalia, waana markii labaad.
Hadaba sidee wax u dhaceen?
Rag ka tirsan Kooxda Al shabaab oo watay Gaari NOAH ah ayaa, islamarkaana ku hubaysanaa Walxaha qarxa & AK-47 ayaa u suura gashay in ay si nabad ah uga gudbaan 2 Bar Koontarool, iyagoo iska dhigaya inay ka tirsan yihiin Ciidamo Illaalo u ah qaar ka tirsan Wasiiradda Dowladda.
Xoogag hubeysan, ayaa weerarka waxay ka soo qaadeen ilbaabada Madaxtooyada ee ku beegan Iskuulka 15-ka May (Fifteen May), iyagoo ka soo gudbay bar kontorool oo ay ku sugnaayeen Ciidanka Dowladda.
Weerarka wuxuu ku bilowday Gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu soo jebiyay Kontoroolka 1-aad ee wadada gasha Madaxtooyada, waxaana xigay rasaas xoogan oo mar kaliya halkaasi is qabsatay.
Xoogaga weerarka soo qaaday, ayaa si toos ah kaga soo gudbay ilinka laga soo galo Madaxtooyada, waxaana jira Ciidan la sheegay inay Shabaabka horey ugu sii diyaarsanaayeen meel ku dhow Albaabka laga galo Madaxtooyada, kuwaa oo ay weerarka wada fuliyeen kuwii kale ee soo jebiyay Kontoroolka hore.
Nimankaan ayaa waxaa hogaaminayay Wiil la yiraahdo Xasan Muxyadiin ‘Bustoolad Weyne‘, oo Madaxtooyadda ka shaqeyn jiray, Aabahiis Masjidka Madaxtooyadda ayuu Iimaam ka yahay.
Xoogagaan, ayaa waxaa la arkaayay iyagoo ka dagaalamaaya agagaaraha Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha Somaliya Dr. C/weli Sheekh Axmed Maxamed, waxaana sidoo kale halkaasi ku qabsaday weerar kulul oo fool ka fool ah.
Intii uu weerarka ka sii soconaayay Madaxtooyada Soomaaliya, ayaa waxay Shabaabku gubeen tiro Gaadiid ah oo Madaxtooyada dhex taalay, waxaana la arkaayay qiiq iyo uuro hawada isu shareertay.
Weerarka & Dagaalka ka dhex dhacay Villa Soomaaliya ayaa socday mudo ka badan 1 Saac, iyadoo markii danbe ay Goobta soo gaareen Ciidamada Gaarka ah ee Alpha Group & AMISOM, si ay u badbaadiyaan Madaxda Dowladda, gaar ahaan RW C/weli & Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Aragtida Shacabka Muqdishu ee Weerarkii Villa Somalia
Shacabka Muqdisho waxay qirayaan in Weerarkii Xalay uu ka xoog badnaa kii kale ee Madaxtooyada lagu soo qaaday bishii Febraayo 21-keeda, iyadoo dadka deggan Degmooyinka ku dhow dhow Madaxtooyada, ay ku sheegeenn in Xalay Villa Somalia faraha looga gubtay Dagaal.
Goobaha ay isugu timaado bulshada degan Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa looga sheekeynayaa in Dowladdu ku fashilmatay suggida ammaanka Magaalada Muqdisho Tan iyo markii ay ku dhawaaqday Barnaamijka Nabad Ku Afur oo isku badelay “Naxdin ku Afur”.
Dadka ayaa kuu sheegaaya inay jiraan xubno ka tirsan Dowladda oo gacan-saar la leh Kooxda Al Shabaab-Al Qaeda, una sahlaaya inay geysato weeraro halis badan lagu gelinaayo Nolosha Madaxda Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo noqday kuwii ugu liitay dowladihii KMG ahaa ee dalka soo maray.
Shacabka ayaa sheegay in aysan suura gal ahayn in Kooxda Al shabaab ay halkii ay doonaan ay weerar ku qaadaan, iyagoo aan haysan Dad la shaqeeya oo Dowladdaa ka tirsan.
Madaxda Dowladda maxay ka dhaheen Weerarkii Villa Somalia?
Weerarka markii uu dhamaaday kadib, waxaa Kulan Deg Deg ah isagu yimid Madaxtooyadda Madaxweyne Xasan Sheekh, RW C/weli Sheekh & Wasiiradda Gaashaandhigga & midka Arrimaha Gudaha, si ay isku tusaan Dayac dhanka Amaanka Noloshooda soo wajahay.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Madaxtooyadda ka maqnaa markii uu Weerarka dhacayay ayaa u sheegay SNTV in uu badqabo, issagoo beeniyay in uu ka cararay Goobta markii uu xoogeystay Dagaalka.”Waa Been Wararka Kooxda Al shabaab ay sheegayaan in aan ka baxsaday Villa Soomaaliya markii ay soo weerareen, waxaan u sheegayaa Umadda Soomaaliyeed inaan badqabo oo uu Madaxweynihiina wali ku sugan yahay Madaxtooyadda,” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Dhanka kale, Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Federaalka, Mustaf Dhuxulow ayaa sheegay in 4 Qof oo Al shabaab ah Weerarka ay fuliyeen, kuwaasi oo 3 kamid ah ay dileen Ciidanka Amaanka, halka mid kalena ay soo qabteen isagoo dhaawac ah oo baxsanaya.
Ma uusan sheegin Wasiirka Khasaaraha dhanka Ciidamada Dowladda & madaxda kale kasoo gaaray Weerarka, balse wuxuu tilmaamay in lasoo weeraray oo ay is difaaceen.
Al shabaab oo sheegtay Mas’uuliyadda Weerarka
Afhayeenka Kooxda Al shabaab, Cabdicasiis Abu Muscab ayaa yiri: “Caawa Al shabaab waxa ay la wareegtay qeybo kamid ah Madaxtooyadda oo Dagaalyahanadeena ayaa ka dagaalamaya.”
Wuxuu sheegay sidoo kale in ay ku dileen Weerarkaasi ugu yaraan 10 ka tirsan Ciidamada illaalada Madaxtooyadda Villa Soomaaliya, Dagaalakana ay ka gaareen Ujeedkii ay ka lahaayeen.
Weeraradii ugu waaweynaa ee ka dhacay Muqdisho 2014
February 21, 2014, Maalin Jimco ah Al shabaab ayaa Weerar Culus ku qaaday Villa Somalia, waxaana lagu dilay Weerarkaasi 22 Qof oo 7 kamid ah ay ahaayeen Al shabaab.
Bishii April, 2014 Labo Xildhibaan oo kala ahaa Cabdicasiis Isaaq Mursal Maalin kadib markii Qarax Gaarigiisa loogu xiray lagu dilay Isaaq Mohamed Cali, oo loo yaqaanay ( Isaaq Rino), iyadoo sidoo kale Weerarkaasi lagu dhaawacay Maxamuud Cabdi Nuux.
May 23, 2014, waxaa Weerar lagu qaaday Golaha Shacabka ee Baarlamaanka, iyadoo Weerarkaasi uu ahaa mid Toos ah oo Al shabaab gudaha u galeen Dhismaha, waxaana ku dhintay 13 Qof oo Ciidamo ay ju jireen, halka 15 kale oo 5 kamid ah ay Xildhibaano ahaayeen lagu dhaawacay.
July 3, 2014, waxaa lagu dilay Muqdisho Xildhibaan Maxa’ed Maxa’uud Xayd, kadib markii laguu Rasaaseeyay Gaari uu la socday Degmada Xamarweyne ee Gobolka Banaadir.
July 5, 2014, markale waxaa la weeraray Dhismaha Golaha Shacabka Baarlamaanka, kadib markii Gaari laguu sooo xiray Walxaha qarxa lagu qarxiyay Afaafka hore ee Xaruuntaasi, iyadoo Weerarkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 6 Qof.
July 8, 2014, sidoo kale Al shabaab ayaa Weerar kale oo Toos ah ka fuliyaya Madaxtooyadda, Khatarna geliyay Nolosha Madaxda Dowladda Federaalka ugu saraysa, iyadoo Weerarkaasi uu noqday midkii ugu hadalhaynta badnaa ee soo mara dalka.
Voa Somali oo Soo Bandhigtay Warar Liyab leh Weerarkii Madaxtooyada Kadib iyo Sir ay Daaha Karogeen(DAAWO VIDEO) – See more at: http://gaafo.com/359184/voa-somali-oo-soo-bandhigtay-warar-liyab-leh-weerarkii-madaxtooyada-kadib-iyo-sir-ay-daaha-karogeendaawo-video/#sthash.FTJDAu19.dpuf